Ciidanka ilaalada shacabka NISA oo la hoos geeyey hoggaanka dabagalka siyaasiyiinta | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Ciidanka ilaalada shacabka NISA oo la hoos geeyey hoggaanka dabagalka siyaasiyiinta
Ciidanka ilaalada shacabka NISA oo la hoos geeyey hoggaanka dabagalka siyaasiyiinta
Warar soo baxaya oo aan ka helnay Saraakiil ka tirsan Hay’ada NISA ayaa sheegaya in Ciidanka Ilaalada Shacabka loo yaqaano ee hoostaga NISA la hoos geeyey Teliyaha Hogaanka Dabagalka Siyaasiyiinta NISA.
Saraakiishan oo diiday in magacooda xigano ayaa sheegay in ciidanka ilaalada shacabka la hoos geeyay hoggaanka cusub ee dabagalka Siyaasiyiinta oo u taliyaha ka yahay Col Abdullahi Dheere oo ah nin ka uu madaxweyne Farmaajo u xilsaaray shaqada dabagalka iyo la socdka Dhaqdhaqaaqyada Siyaasiyiinta mucaaradka ah.
Ciidanka ilaalada Shacabka ayaa la sheegey inay yihiin dhar cad diyaarsan, laakiin ku hubeysan Hubka fud-fudud (bastoolado iyo Ak-47).
Taliyaha Hogaamiya Hogaanka Dabagalka Siyaasiyiinta ayaa saraakiishu sheegayaan in uu yahay ninka 2aad ee ugu dhow Madaxweyne Farmaajo kuna aaminey howshaan waxaa keliya ka sareeya Taliyaha NISA Fahad Yaasiin.
Taliyahan ayaa la sheegey in uu heesto dhalasho ahaan ka soo jeedaa kelinka shanaad ee Soomalidu degto.
Maqaal horeAkhriso: Wararkii ugu dambeeyey dagaalladii ka dhacay gobolka Mudug
Maqaal XigaMaxay ka wada-hadleen MW Farmaajo iyo Axmed Madoobe?